Bandhigga jiingado, warqad sariirtaada, Sanduuqa Geli - Raymin
Bandhigga Kartoonada Gaarka ah & Baakadaha WarqadahaNaqshadeeye & Soo saare
Raymin Display Products Co., Ltd waxaa la aasaasay 2012. Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista kartoonada POP, oo ay ku jiraan soo bandhigida kartoonada, sanduuqa adag iyo baakadaha warqadaha ah.
Warshaddeenu waxay ku taal Foshan, oo leh aagga warshad 50,000 ㎡. Wax soo saarkayaga waxaa loo iibiyaa USA, Australia, Germany, France, England, the Netherlands, Japan, Hong Kong, Mainland China iyo suuqyada kale ee caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Waxaan sidoo kale nahay shirkad daacad u ah Wal-Mart, Disney, Coco Cola iyo iwm.
Aynu ka dhigno badeecadaada mid heer sare ah gaar ahaan kartoonka dipslay, baakadaha waraaqaha iyo ddpanrinsert
Warshadaha Codsiga: Cadar, Cosmetics, Wine, Watch, Aroos, Dahab iyo Waxyaabaha Udgoon: C ...
Tayada raaxo sanduuqa Baako Baako for Khamri cas ...
Warshadaha Codsiga: Qamriga Waxyaabaha: 157gsm warqad dahaarka leh + 1500gsm sabuurad muuqaal ah: waara, Hig ...
Qaab tayo sare leh sanduuqa isku laalaabka sanduuqa oo leh dabaq l ...
Saanduuqa qurxinta ee isku-duuban ee isku-duuban
Xajmiga 25 x 25 x 6cm Waxyaabaha 157gsm warqad dahaarka leh + sabuuradda 1200gsm, Midabka Waraaqda Gaarka ah ...
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheennu waxay noo yimaadaan iyagoo raadinaya xalka xumbada xalka. Nasiib wanaag, waxaan keydineynaa ballaaran ...
Tilmaamaha oo faahfaahsan: Nambarka Qaabka: GFCD20200405 Cabbirka: W12 '' x D8 '' x H15 '' wax ...
Nambarka Qaabka: GFPD20200705 Cabbirka: W48 '' x D20 '' x H48 '' maaddada 'B' biibiilaha B + + 350gsm CCN ...
Lambarka Moodalka: GF20200158 Cabbirka: W45 x D30 x H145CM maaddo biibiile adag oo EB ah (laba-derbi) +3 ...
Lambarka Moodalka: GFFD20200809 Cabbirka: W20 '' x D12 '' x H60 '' alaab xoog leh oo loo yaqaan B B + + 350gsm CCN ...
Muuqaalka Raymin wuxuu u hoggaansami doonaa wax soosaarka warshadaha sida istiraatiijiyadda horumarinta, wuxuu sii wadi doonaa inuu xoojiyo hal-abuurnimada farsamada, hal-abuurnimada maareynta iyo suuq-geynta suuq-geynta oo ah udub-dhexaadka nidaamka hal-abuurnimada, wuxuuna ku dadaalayaa inuu siiyo macaamiisha caalamiga ah xirmooyinka ugu habboon iyo xalka muujinta.
Adeeg hal-joog ah oo ka imanaya nashqadaynta, noocyada, wax soo saarka iyo keenista.
Waxaa baaray BSCI, CQC, FSC, IQBET, ISO 9001, Walmart, Disney iyo FSC.
Samee xiriir ganacsi oo waqti dheer ah Walmart, Disney, Target iyo Costco.
Milkiileyaal badan oo dukaamada tafaariiqda ah iyo dukaamada tafaariiqda ah ayaa adeegsada tusaalooyin alwaax ah si ay u soo bandhigaan wax soo saarkooda, laakiin isticmaalka kaararka boodhadhka baakadaha ayaa sidoo kale caan ku noqday. Waxaad ogaan doontaa muuqaalka kartoonka oo taagan ...
Waa maxay Box adag? Sanduuqyada adag ayaa ka mid ah qaybaha loogu raadinta badan yahay ee sanduuqyada baakadaha. Ku dhowaad dhammaan noocyada raaxada waxay u adeegsadaan baakadaha adag si ay u helaan maqaalladooda qaaliga ah ee jilicsan. Sanduuqa adag
Talaabo Kasta Waxaa Lagu Maamulaa ISO 9001: 2008 Shahaado
Muuqaalka Raymin wuxuu ka gudbay shahaadada nidaamka tayada leh ee ISO 9001, BSCI, Wal-Mart, Disney iyo xisaabaadyo kale, oo adeegyo u fidiya shirkado badan oo 500 sare ah iyo macaamiil caan ah oo heer sare ah, iyagoo siinaya alaabooyin soo bandhiga xirfadlayaal iyo tartamo, xalal iyo adeegyo macaamiisha. qalabka elektarooniga, qurxinta, cuntada, baahiyaha maalinlaha ah, hadiyadaha, warshadaha dawooyinka iyo alaabada caafimaadka iwm.
Aynu maanta ka wada hadalno baahiyahaaga suuqgeynta! Aynu iftiiminno alaabtaada!